Inkathi yokwakha ikusasa elibukhali lobuKhomanisi lihlanganisile umqondo ezingqondweni zabantu (abadala, yebo) ukuthi ukuthola izinsizakalo zomphakathi kuhlotshaniswa nesidingo nokungaqiniseki kokuzithoba ngokuma emigqeni ende. Futhi lo mhlangano waba namandla kangangokuthi namuhla isayithi le "State Service", lapho ungaxazulula khona izinkinga eziningi ngaphandle kokushiya ekhaya, eziningi zibangele ukungathembeki.
Izinsizakalo zikahulumeni ngaphandle kohlu lokulinda
I-portal iyisici esisodwa sokufinyelela kuwo wonke amasistimu elwazi mayelana nezinsizakalo neminyango evela kubhaliso lwamazwe wezinsizakalo zomphakathi ngokuhambisana nomthetho weRussian Federation. Ukucubungula izicelo ze-elekthronikhi, isayithi isebenzisa uhlelo lwelwazi lokusebenzisana kwe-interagency. Ukubhalisa kwi "Izinsizakalo Zombuso" kunikeza umsebenzisi cishe amathuba angenamkhawulo. Ngaphandle kokushiya ekhaya, ungabheka isikweletu sakho sentela, ukhokhe imali yamaphoyisa emgwaqeni, ufake isicelo sokuthola indawo noma uthole ilayisense yokushayela nokunye okuningi.
Kungenzeka ukuthi mayelana nokukhona kwalesi sayithi, isigamu esihle sabantu baseRussia asisho ngisho nokusola, futhi labo abazi, bayisebenzise akusebenzi. Abaningi bamane abaqondiswa kahle phakathi "emakhabhinethi" amaningi angenalutho enkulu. Noma kunjalo, ufisa ukufunda ukuthi ungabhalisa kanjani kwisayithi ye "Service State", nsuku zonke iba ngaphezulu.
Ungafika kanjani kusayithi?
Ngokuya ku-gosuslugi.ru, uzothathwa kusayithi elifunayo. Uzokwamukelwa kahle futhi uzocelwa ukuba ucacise indawo yokuhlala, ongayenza ngokuchofoza inkinobho ethi "Indawo yakho" phezulu. Okuncane okuncane ibha yemenyu enezinto ezintathu: "Izinsizakalo zomphakathi", "Iziphathimandla" kanye no "Usesho lweSevisi", oluzovula okuqukethwe futhi lenze imisebenzi yalo ngesicelo kwanoma ubani, kuhlanganise nomsebenzisi ongabhalisiwe. Ngakho-ke, ngaphambi kokubhalisa "Izinsizakalo", kungase kuzuze ukujwayelana nensiza, ozoyibeka idatha yakho yomuntu siqu.
Ikhasi "Izinsizakalo Zomphakathi" linikeza uhlu olugcwele lwamasevisi anikeziwe, aphulwe yisigaba. Esigabeni esithi "Iziphathimandla", zonke izinhlaka ezihilelekile ekuhlinzekeni kwezinsizakalo zomphakathi ziboniswa. Inkambu ethi "Sesha izinsizakalo" isebenza okufanayo nokuseshwa kwinethiwekhi, okungukuthi, ngokucacile umbuzo uwukuthi, kunembile kakhulu uzothola impendulo.
Ukulungiswa kwedatha yokubhalisa
Kodwa-ke, sibuyela esihlokweni salesi sihloko, ngoba, cishe, uma umsebenzisi enesithakazelo sokubhalisa kwi-portal services portal, usevele ejwayele ngamakhono akhe. Ngakho-ke sicindezela inkinobho ethi "Ukubhalisa" ngakwesokunxele (ngaphasi kokubhaliswa "iKhabhinethi yomuntu siqu"), siyazi kangako ulwazi olwesobunxele bese siqhubeka nokugcwalisa ifomu ngakwesokudla. Kodwa kusengaphambili, kungcono ukulungisa ipasipoti yomphakathi kanye nesitifikedi somshuwalense somshuwalense wempesheni oyimpoqo kusengaphambili (udinga i-SNILS), futhi uvuselele inombolo yakho yefoni yeselula noma ikheli le-imeyli, ngoba ungabhalisa "Amasevisi" ngokucacisa noma enye. Uzobona lokhu uma uchofoza isixhumanisi "Anginayo ifoni ephathekayo" - kulokhu uzocelwa ukuba ufake ikheli le-imeyili.
Uma, isibonelo, ungenayo enye noma enye, ungasebenzisa i-imeyili yomunye umuntu (ngokuvuma komnikazi, yebo), ngoba endaweni yesevisi kahulumeni akukhathaleki ukuthi iyiphi ikheli elisetshenzisiwe, noma kunjalo, lokhu kusebenza nezinombolo zomakhalekhukhwini .
Ngaphambi kokuchofoza inkinobho ethi "Irejista", ungajwayela imigomo yokusetshenziswa, inqubomgomo yobumfihlo, ucacise ezinye izimo mayelana nokubhalisa kwezinsizakalo zikahulumeni, kodwa le nqubo ngeke ithinte inkambo eqhubekayo yenqubo.
Uma inombolo yefoni icacisiwe, linda izindaba ngokususa ukuqinisekisa, ukuthi uzokwenzani ngokufaka ikhodi yokuqinisekisa, okuyinto isayithi le "State Service" elizothumela kwi-SMS ngokushesha. Futhi uma unekheli le-e-mail, uzothola incwadi okuzodingeka ukuthi uchofoze kusixhumanisi esinikeziwe.
Sinikeza "amasevisi kahulumeni" ngemininingwane yomuntu siqu
Khona-ke uzoyiswa ekhasini "eliyimfihlo," lapho, lapho uqala ngokucophelela, udinga ukungena, uqinisekise futhi ugcine iphasiwedi esungulwe.
Ukwamukela ukuhalalisela ekuqedeni okuphumelelayo kwalokhu, kuvela, inqubo elula, njengokubhalisa esakhiweni se "State Service", ungahamba ngokushesha ukuthola izinsiza zomphakathi ezingadingi idatha eqinisekisiwe mayelana nawe nobufakazi bokuthi ungubani. Kodwa kungcono ukuchofoza inkinobho ethi "Ngena bese ugcwalisa inkinobho yomuntu" uma uhlose ukuba ngumklayenti ogcwele wesayithi futhi usebenzise ngokungenamkhawulo uhla olubanzi lwezinsizakalo ezinikezwe nguhulumeni.
Ngaphambi kokuya ekhasini elinokugcwalisa idatha yomuntu siqu, kuzomele ungene ngemvume ku-akhawunti yakho usebenzisa inombolo yefoni (noma ikheli le-imeyili) nephasiwedi. Ngemuva kokungena, uzobona idatha yakho engenele kakade kanye nesiphakamiso se- "Iya kokuhlela".
Sidlula ngaphandle kokucabanga, chofoza inkinobho ethi "Qinisekisa", uvuma ukuqinisekisa i-akhawunti yakho, bese uya ekhasini "Ukugcwalisa nokuhlola idatha yomuntu siqu", lapho kufanele sidlule khona kuqala kwezigaba ezintathu zenqubo yokuqinisekisa "Ukufaka idatha yomuntu siqu."
Lapha konke kulula kakhulu, futhi ngokugcwalisa kuzo zonke izinsimu, ungaqhubeka noma uqhubeke kamuva (lonke ulwazi luzogcinwa, ngoba kungenzeka ukuthi ubhalise ne "Izinsizakalo Zombuso" ngeziphazamiso).
Siyaqhubeka, singahlehlisi emuva kwesikhathi
Uma konke kugcwaliswa kahle futhi ngokugcwele, ngokuchofoza inkinobho ethi "Qhubeka", sithumela idatha yomuntu siqu ukuqinisekisa okuzenzakalelayo, okuzokwaziswa ekhasini elilandelayo lesinyathelo esilandelayo ekuqinisekiseni i-akhawunti. Naka amanaki ngakwesokunxele kwezinto ezihloliwe "Ukuhlola ..." nokuthi "Ukuhlola idatha ...". Isimo esihloliwe sibhalwe ngombuthano ohlaza okwesibhakabhaka, okuzovela ngokushesha ku-SNILS (okungenani masinyane uma inombolo ilungile), kodwa eceleni kwento "Ukuhlola idatha ..." endaweni yomaki kuyoba nesikhathi esithile sokushintshanisa nxazonke zomcibisholo wombuthano, ukubambisana Umngane.
Ngenkathi kukhona "isheke esiyindilinga", uzothola isikhathi sokuqonda ukuthi akunzima ukubhalisa kwi-portal services portal, futhi ufunde ngezansi ukuthi ukuqinisekiswa kuzovame ukuthatha imizuzu embalwa kuphela, kodwa kungadlulela ezinsukwini ezinhlanu, nakuba kuzoqhubeka ngisho Uma uvala ikhasi.
Uma konke kuhamba kahle futhi uphawu lokugcina luphendukile oluhlaza, khona-ke ukuqinisekiswa kwedatha yakho yomuntu siqu kuqediwe, ukuthi yini ozoyifunda kusuka kwi-SMS (uma inombolo yefoni yeselula icacisiwe) noma kusukela encwadini (uma ikheli le-imeyili linikeziwe), futhi kusayithi uzoholela emfolokweni wezintathu Izinketho zokwenza okuqhubekayo.
Siyavuma ukuqinisekisa ukuthi ungubani
I-"Ukungena ngemvume" futhi "Iya kuKlayenti Yezinsizakalo" izinkinobho kuzokunika ukufinyelela ohlwini olwandisiwe lwezinsizakalo zomphakathi, kodwa ukuze uthole amathuba eminye yamathuba amakhulu, unga (ngokushesha, udinga) ngokushesha uqhubeke uqinisekisa ukuthi ungubani (nakuba ungase ufike esikhathini esithile, noma nini ).
Ngendlela, uma ungabaza ukuthi kusebenza kanjani ukuqinisekisa i-akhawunti, hlola ikhathalogu yezinsizakalo ezitholakale kuwe futhi uhlole ukuthi kukhona yini okukhona kulokho okwenzele ukubhalisa kuwebhusayithi ye "Service State".
Ubufakazi bokuthi ungubani kuzokuvumela ukuba ukwandise amakhono e-akhawunti yakho futhi ungasebenzisi ngokungapheli zonke izinsizakalo ze-elekthronikhi ezibalulekile ngomqondo wezomthetho. Ngaphandle kwalokho awukwazi, isibonelo, ukukhipha ipasipoti, ubhalise endaweni yokuhlala noma uhlale, ubeke imoto nokunye okuningi. Ngakho - akungabazeki, kubalulekile ukuqinisekisa.
Siyaqhubeka nesiqiniseko, sidlule inqubo ejwayelekile yokugunyazwa (manje ungangena ama-SNILS ngaphezu kwenombolo yefoni nekheli le-imeyili) futhi futhi sibhekene nokuzikhethela. Lapha uzonikezwa izindlela ezintathu zokuqinisekisa ukuthi nguwe.
Ngemuva kokukhetha inketho "Faka isicelo sakho siqu" kuzodingeka uvakashele isikhungo esisodwa sezinsizakalo ezikhethiwe futhi uhlele konke ngokubonisa idokhumenti ekhonjisiwe ngesikhathi sokubhalisa.
Uma ukhetha ukuthola incwadi ngekhodi yokuqinisekisa ngeposi, sicela unikele ngekheli eliningiliziwe ngokugcwalisa ifomu nokuhleleka kokuthi "khulula". Incwadi ingakwazi "ukugijimela" cishe amasonto amabili (okwenziwe ngokwezifiso), kodwa ngokuvamile iza kuqala (ezinsukwini ezingu-5-7), futhi ukubuyisela kungenzeka akunakwenzeka kunezinsuku ezingu-30 (uma usheshe ungafundile ngakho), ngakho-ke zonke Icala ungakhohlwa yonke imininingwane yokuthi ungabhalisa kanjani "Izinsizakalo".
Izimo zokuqinisekisa ukuthi ungubani usebenzisa isignesha ye-elekthronikhi noma i-UEC zitholakala ngokuningiliziwe emlayezo ovela ekhasini uma lolu khetho lukhethiwe. Uhlu lwezikhungo zokugunyazwa ezigunyaziwe lapho isignesha ye-elektroniki ingatholakala khona ishicilelwe kwiwebhusayithi yoMnyango Wezokuxhumana waseRussia, kanye ne-UEC (Universal Electronic Card) ingatholakala kwiwebhusayithi yezinhlangano ezigunyaziwe zezinhlangano ze-Russian Federation.
Ukuze uthole ulwazi: isignesha kagesi isethi yamatshwayo Ngefomu le-elekthronikhi bese ujoyina idokhumenti (futhi nayo i-electronic), edinga ukuqinisekiswa komuntu oyisayine. Ukusetshenziswa kwesignesha kagesi kunikezwa ukuqinisekisa ukuthi ungubani uma uthola izinsizakalo ze-intanethi nezomasipala ezidinga ukucaciswa okuqinile.
Njengoba ukhethe ukhetho lokuposa, uzobe usukhasini "Ulwazi lomuntu siqu" ngefasitela lokungena ikhodi, esevele isendleleni. Okwamanje, ungabheka imininingwane eyisisekelo ngawe futhi, uma kunesidingo, hlela (inkinobho phezulu ngakwesokudla) noma wengeze ulwazi olulahlekile, isibonelo, i-TIN, izinombolo zocingo, izidingo zelayisensi yokushayela, njalonjalo.
Uma ukhohlwa (noma angazi) i-TIN yakho, chofoza ngesibindi isixhumanisi ngesiphakamiso ukuze uyithole, futhi uma ikhona, ngemizuzu embalwa inombolo izovela futhi umaki oqinisekisiwe uzokhanya ngokuhlaza.
Ungaya kuthebhu ethi "Izilungiselelo ze-Akhawunti" futhi ushintshe iphasiwedi kusigaba "Okujwayelekile" noma ucacise umbuzo wempendulo eyimfihlo ukuze uvikele kangcono i-akhawunti yakho. Esigabeni "sezehlakalo zokuphepha" uzoboniswa lezi zenzakalo futhi kuzokuvumela ukuba ulungise izaziso.
Ngemva kwesikhashana, lapho incwadi enekhodi yokuqinisekisa ifika kuwe, ukuxhuma kunsizakalo yeRussia Post kuzovela ekhasini lomuntu siqu, lapho ungakwazi ukulandelela khona inqubekela phambili yokuthumela imilayezo.
Ngemva kokuthola le ncwadi, yiya ku-akhawunti yakho, faka ikhodi yokuqalisa ensimini ekhethekile futhi, ngokuchofoza okuthi "Okulandelayo", funda umlayezo osalindelwe isikhathi eside futhi uphefumule ukusizwa: "I-akhawunti yakho isebenze". Manje unomnikazi weKhabhinethi yomuntu oyithandayo futhi uncike kunoma iyiphi insiza ye-elektroniki yeziphathimandla. Ungangena ngemvume usebenzisa ithuluzi lokusayina le-elektroniki bese ubuyisela ukufinyelela kuphrofayela yakho ngokuxhumana nesikhungo sesevisi.
Kunconywa ukuthi ungahlehlisi ukusebenza kokufaka ikhodi, ngoba ukubambezeleka kungaholela ekumangaliseni okungavumelekile (isibonelo, ikhodi ngeke ibe yinto evumelekile), ebangelwa ezinye izibuyekezo kusayithi (i-portal iqhubeka ithuthukiswa futhi ivuselelwe). Akukho lutho olubi ngalokhu, akunjalo, hhayi, ngoba ungathumela isicelo sesibili futhi ulinde amasonto ambalwa futhi, kodwa ngani?
Futhi kuthiwani uma ...?
Qonda ukuthi ungabhalisa kanjani ne "Izinsizakalo", akuzange kube nzima kakhulu, kepha kuvela ukuthi ngezinye izikhathi lokhu akuwona ukuphela kwezinkinga. Uhlelo lunikeza iphutha mayelana nokubhaliswa okungaphelele, ukuphika ukuthi kungenzeka ukuthola izinsizakalo, ngakho-ke kudinga inqubo egcwele yokubhalisa, noma ngabe idlulile, idatha yomuntu siqu yenqaba ukugcwaliswa, isevisi ye-Federal Migration ye-Russian Federation ayiqinisekisi ukuthi kukhona i-identity document , Khona-ke incwadi enekhodi ayifuni isikhathi eside.
Kungaba nezinkinga eziningi ezifanayo, futhi ngamunye wabo angadinga ingxoxo ehlukile, kodwa ngokuvamile imibuzo ixazululwa yisevisi yokusekela i-portal, engabizwa mahhala ngocingo: 8 (800) 100-70-10 (eRussia). Ngezinye izikhathi uma kwenzeka izinkinga, kuyasiza ukuhlanza amakhukhi noma ukuya kusiphequluli esihlukile.
Izinga lomsindo elivumelekile ezindaweni eziphilayo
"Amandla Okudla": ukubuyekezwa kanye ukufundwa
"Borovichi-ifenisha": ukubuyekezwa. "Borovichi-ifenisha": ekhishini. ifenisha Wezingane "Borovichi"
Intathelizindaba leonid Golovanov: Biography nesithombe
Kanjani ukubala inzalo yemali ebolekwayo: ifomula. Ukubala inzalo yemali ebolekwayo: Isibonelo